सुशान्तले देहत्याग गरेकै दिन सुशान्तलाइ सबैभन्दा पहिले चर्चामा ल्याउने निर्मात्री एकता कपुरलाई आयो यस्तो धम्कि ! – Jagaran Nepal
सुशान्तले देहत्याग गरेकै दिन सुशान्तलाइ सबैभन्दा पहिले चर्चामा ल्याउने निर्मात्री एकता कपुरलाई आयो यस्तो धम्कि !
काठमाडौँ – बलिउड क्षेत्रमा एक पछि अर्को शोकको घटना बढ्दै गएका छन् । बलिउडले एक पछि अर्को होनहार कलाकार गुमाउँदै गएको छ । ऋषीकपुर, इसफान खान, चचीृत संगितकर्मी वाजिद लगायतलाई वलिउडले लकडाउनकै क्रममा गुमायो । आइतवार विश्वासै गर्न नसकिने अर्का एक होनकार कलाकारलाई पनि गुमाएपछि बलिउड शोकमा छ ।
बलिउड अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतले देहत्याग गरेका छन्। मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै घरमा उनले आइतबार पा सो लगाएर देहत्याग गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। आफ्नो करियरलाई उकालो चढाइरहेका ३३ वर्षका कलाकार तथा अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले देहत्याग गरेका छन्।
उनको निधनको खबर सामाजिक संजालमा आइरहंदा यता उनलाई चर्चामा ल्याउने निर्मात्री एकता कपुरलाइ पनि ध’म्कि आएको छ । अभिनेता सुशान्तले आफ्नो करियरको सुरुवात टीभी एक्टरको रुपमा सुरु गरेका थिए । उनले सबै भन्दा पहिले ‘किस देश मे है मेरा दिल’ नामक धारावाहिकमा काम गरेका थिए । तर, उनी एकता कपुरको धारावाहिक ‘पवित्र रिश्ता’बाट चर्चामा आउन सफल बनेका थिए ।
उनले पछिल्लो पटक निर्माण गरेको विवादित वेब सिरिज ुत्रिपल( अनसेन्सर्डु का कारण उनलाई यस्तो ध’म्की आउन थालेको हो । अल्ट बालाजीसँग मिलेर उनले निर्माण गरेको वेब सिरिजको एक दृश्यमा सेनालाई अ’पमान गरेको भन्दै आ’लोचना खेपिरहेकी छन् ।
उनलाई सामाजिक सञ्जालमा निकै आ’लोचना गरिएको छ । उनलाई सो सिरिज बन्द गर्न पनि ध’म्की दिइएको छ । आलोचना सहेकी एकता वि’रुद्ध अदालतमा मु’द्दा समेत गरेको छ । उनी बिरुद्द युट्युबर विकास पाठकले केही दिन अघि सो दृष्यलाई लिएर प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् ।
सेनाको पहिरनलाई इरोटिक दृश्यमा प्रस्तुत गरे पछि उनी वि’वादित बनेकी हुन् । उनलाई सामाजिक सञ्जालवाटै करणीको ‘ध’म्कि आउन थालेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । ुहिन्दुस्तान टाइम्सु मा उल्लेख भएको समाचारमा उनले आफुलाई त्यस्तो ‘ध’म्की आएको बताएकी छन् ।
यो महान मानिस जो आफूलाई देशभक्त ठान्छ । उसले मेरो आमा र मलाई ‘दु’र्व्य’वहा’र गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा खुलेआम क’रणी गर्ने ध म्की दिइसकेको छ,ु उनले समाचार माध्यमसंग भनेकी छन् । उनले यो विषय सेनाको मात्र विषयवस्तु नभएको जनाएकी छन् ।
उनले सिरिजमा ‘से’क्सु’अ’ल क’न्टेन्ट राखेकी छन् । त्यसैको आधारमा ुआफुलाई त्यस्तो ‘ध’म्की आएको उनले दावी गरेकी छन् । उनले भनेकी छन् एक महिलालाई करनी गर्नु, उसको छोरीको क’रणी अनि उसको ७१ वर्षिया आमाको कर’णी गर्नुु भन्ने विचारको अर्थ त यौ’न खराब हो तर करणीचाहीँ ठिक्कै छ भन्ने हो नि ।ु
एकताले उक्त दृश्य सिरिजबाट हटाउनु र मा’फी माग्नु ठूलो कुरा नभएको भन्दै समाजमा जरो गाडेर बसेको मानसिकता ठूलो भएको बताएकी छन् । निकै आ’लोचना सहेपछि उनले सो दृष्य सिरिजवाट हटाइसकेकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा यसरी क’रणीको ध म्की आउन थालेपछि उनले त्यसरी ध म्की दिने विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेकी छन् । उनले भनेकी छन् ुयदि उनीहरुले आज मेरो नां’गो त’स्बिर इन्ट’रनेटमा सार्वजनिक गर्छु भन्न सक्छ भने भोलि अन्य महिलालाई जे पनि गर्न सक्छ,ु उनले भनिन् ।